Ikhamera yeHuawei P20 Pro ayigqithi kuleyo ye-iPhone XS | I-Androidsis
Ngalo lonke ixesha i-terminal entsha ifika kwintengiso, uninzi lwabasebenzisi abalinde uhlalutyo lokuqala isigqibo sokuba uza kuyivuselela nini itheminali yakho. Iitheminali zamva nje zokufika kwintengiso yi-iPhone XS kunye ne-iPhone XS Max, iimodeli ezimbini umahluko wazo kuphela ubungakanani bekhusi.
Nje ukuba ifikelele kwintengiso, bonke abasebenzisi ababelinde uhlalutyo lwekhamera ukuthatha isigqibo bakwithamsanqa, kuba i-iPhone XS iphumelele iimvavanyo ze-DxOMark, uhlalutyo beka i-iPhone XS kwindawo yesibini engezantsi kweHuawei P20 ProIsiphelo sendlela esilawulayo, kwakhona, ukugcina indawo ephambili kolu luhlu.
Ingxaki ka-Apple ngeekhamera kule minyaka idlulileyo, kubonakala ngathi iphuculwe kule nguqulo intsha, eye yayivumela ukuba iqhubele phambili iindawo ezimbalwa kuhlelo kunye nokuphucula amanqaku, kodwa kubonakala ngathi ayonelanga kule nkampani, kuba ihleli inamanqaku amathathu ngezantsi kweflegi yeHuawei, iP20 Pro, isiphelo sayo ineekhamera ezi-3 ngasemva, ekuyeyona ndawo ibalaseleyo kwintengiso, kwicandelo lokufota, ngexesha le-2018.
Kwiminyaka yakutshanje, siyibonile inkampani esekwe eCupertino ayisekho ireferensi yentengiso kwicandelo lokufota. Isamsung yinkampani yokuqala egqithe kakhulu kumgangatho wekhamera ye-iPhone, kodwa yayingeyiyo yodwa, kuba iHuawei eneP20 Pro nayo iwenzile kakuhle umsebenzi wasekhaya, owenze ukuba ibe sesona sixhobo siphezulu kwimarike icandelo lokufota, njengoko kubonisiwe kuvavanyo olwahlukeneyo olwenziwe kuzo zonke iiterminal ze-DxOMark kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ikhamera yeHuawei P20 Pro ayigqithiswanga yenye ye-iPhone XS
[APK] Yahoo Ndawonye liqela eligqibeleleyo lokuncokola neqela losapho kunye nabahlobo